ny solontenan’ireo mpianatra fa mikasika ny fitakiana ataon’ireo rafitra rehetra eny amin’ny anjerimanontolo na mpianatra na mpampianatra na mpandraharaha dia tokony hahaleotena izy ireny amin’ny fitakiana ataony. Tsy azo ekena ny fidiran’ny sehatra tsy voakasika ao, hoy ny filohan’ny fikambanan’ny mpianatra eo anivon’ny MAFAMI Ambohipo, Tsilavina Harilala. Ny mpampianatra, ohatra, dia tsy tokony hanao fitaovana ny mpianatra na mpandraharaha. Ny tiana ahatongavana dia aoka tsy hifampijabaka. Mandeha ankehitriny ny siosion-dresaka fa hampiantso mpianatra ny Seces ho ataony fitaovana, hoy ny mpitondra tenin’ireo mpianatra, Maurice Rakotonirina. Tsy misy idiran’ny mpianatra ny fitakian’ny Seces ary toy izany koa ny an’ny mpianatra saingy rehefa misy kosa ny tombontsoa iombonana ao anatin’ny fitakiana dia afaka mifanaraka sy mifanohana ny rehetra. Isan’izany, ohatra, ny resaka kianjana Golf tamin’ny fotoan’androny, hoy izy. Samy nanamafy moa na ny Seces na ireto mpianatra ireto omaly fa tsy nisy izay fifampiantsoana izay.
Légende : Ny solontenan’ireo mpianatra nanao fanambarana teny Ankatso omaly